मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ... - विविधा - कान्तिपुर समाचार
मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ...
कार्तिक ९, २०७५ दिवाकर बागचन्द
न्यूयोर्क — समाजले सम्मान पूर्वक नबोल्दा एउटा ठुलो समुदाय आहत् भएको सत्य कसैदेखि छुपेको छैन । कतिपयलाई लाग्ल 'तिमी' भन्दैमा, जातीय कुरा गर्दैमा दुख्नु पर्ने के छ र? दुखाइ भोगेकासंग हुन्छ, पीडा साटेर त हेर्नुस् अनि थाह हुनेछ दुखाइ के हो भनेर ।
नारायण गोपालको नाम उच्चरण गरेपछि, को? भनेर परिचय दिनु आवश्यक हुँदैन । नारायण गोपाल आफैमा एउटा परिचय हो । नेपाली सांगीतिक आकाशका जज्वल्यमान तारा नारायण गोपालसँगको मेरो दैवले जुराएको भेटको स्मरण गर्न चाहन्छु । मलाई त्यो दिन याद छ, तर कुन साल हो विर्सिएँ । म स्कुलमा पढ्थें । नारायण गोपालको धनगढीमा सांगीतिक प्रस्तुती थियो । कार्यक्रम स्थलमा ठुलो भीड थियो । म र मेरो साथीसँग शो हेर्न टिकट थिएन । पास हुने कुरै भएन । तैपनि स्वर सम्राटको दर्शन पाइने आशमा यताउता भौतारिइरहेका थियौं । भगवानको कृपा, नारायण गोपाल म र मेरो साथीतिर आउनुभो, २० रुपैया दिंदै भन्नु भो, 'बाबु उ त्यो ठेलाबाट बदाम किनेर ल्याइ दिनुस् न ।'
यति ठुलो हस्तीलाई यति नजिकबाट देख्न पाउँदा सपना झै लाग्दै थियो । त्यस माथी हामी स्कुले 'भुरा'लाई तपाई भनेर सम्बोधन गरेको देख्दा असिमित सम्मान जागेर आयो ।
संगीत अमृत रस हो, जसले मानव मात्र नभएर सम्पुर्ण प्राणी र जगतलाई सिञ्चित गर्न सक्दो रहेछ नारायण गोपालले हामीलाई महशुस गराउनु भो । शो त हेर्न पाइन, तर बाहिरबाट स्वर सम्राटका सुमधुर अवाज सुनि रह्यौं “मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ………”
कुरो ९० को दशक को हो सायद । रेडियो नेपालबाट एउटा यस्तो गीत सुनें, जसले मेरो जीवन जगत प्रतिको दृष्‍टिकोण निर्माण गर्‍यो । गीत थियो, बरिष्ठ निर्देशक, गीतकार यादव खरेलको ''यस्तै रहेछ यहाँको चलन....।'' यो गीत त्यतिखेर सम्पूर्ण नेपालले गुनगुनाउथ्यो भन्दा अत्युक्ति नहोला । जब देश कुनै गीत गुनगुनाउन थाल्छ त्यो गीत गीत मात्र रहँदैन । गीतकार गीतकार मात्र रहँदैन, संगीतकार संगीतकार मात्र हुँदैन्, गायक गायक मात्र रहँदैन । उनीहरु चेतना, विवेक र सोचका प्रतिक बन्दछन् । यस्तो संगीत कालजयी हुन्छ र यसले एउटा "क्रिटिकल मास" तयार गर्छ । यी भए नेपाली सुगम संगीतका स्वर्णिम् दिनका कुरा ।
अव प्रसंग टीभी संगीत प्रतियोगिताको,
आजकल नेपालमा थुप्रै साँगीतिक टीभी प्रतियोगिताहरु प्रसारित हुन्छन् । त्यस मध्ये नेपाल आइडोलको चर्चा बढि छ। यो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने थलो हो । नेपालका कुना कन्दरामा लुकेर रहेका प्रतिभालाई खोजेर एउटा मञ्च दिनु एउटा प्रशंसनीय कार्य पनि हो । यति हुँदाहुँदै पनि यसका केहि कमजोरीहरु छन्, ।
पहिलो, : यस कार्यक्रममा केहि निर्णायकहरुले प्रतियोगिहरुलाई "तिमी" भनेर सम्बोधन गर्छन जुन, माया, स्नेहपूर्वक भनिएको हो भने पनि सार्बजनिक कार्यक्रममा यसरी सम्बोधन गर्दा भद्दा र अशोभनीय लाग्छ । यसलाई साँगीतिक सँस्कार सम्मत मान्न सकिन्न । यसले नेपालको गणतान्त्रात्मक र लोकतान्त्रिक चरित्र निर्माणमा सहयोग गर्दैन । यसले "फिउडल माइन्ड्सेट'' तर्फ इङि्गत गर्दछ ।
दोस्रो, सामाजिक सञ्जालमा प्रतियोगिहरुका आफन्तले जातीय आधारमा भोट माग्ने गरेका कुरा आएका छन् । जुन खतरनाक प्रबृति हो । यो राजनीतिक चुनाव होइन, यसले संगीतको उचाइ कम मात्र होईन, संगीतको पनि जात हुन्छ भन्ने एउटा गलत नजिर तयार गर्नेछ । यसले समाजलाई ध्रुबीकरण गर्ने छ । संगीत त समाज जोड्ने शक्ति हो । यसमा नेपाल आइडल आयोजकको कुनै दोष नभए पनि एउटा आचार संहिता आवश्यक देखिन्छ । शायद होला पनि ।
म संगीत साधक त होइन । नबुझे पनि सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको छु । मेरा लागि संगीत उत्कृस्ट कला हो । मेरो बुझाइमा ‘‘संगीतको उत्पत्ति मानवीय संवेदना सँङै भएको हो । केहि सोधले के भन्छन भने, कुनै प्रकारको पीडा भएको मान्छेलाई संगीत सुनाइयो भने दुखाइ कम हुन्छ । पीडाबाट ध्यान हट्छ । यसले दुखाइ कम भएको मह्सुस हुन्छ । भनिन्छ, संगीत सुन्दा डोपामाइनको स्तर अधिक हुन्छ र यसले खुशीको लहर पैदा गर्छ । मेरा लागि जीवन हो, संगीत । सभ्यताको परिचायक हो ।
नेपाल आईडलको मञ्चमा कोही निर्णायकले प्रतियोगलाइ तिमी भने सम्बोधन गरिरहँदा दशकौं अघि स्वर् सम्राटले दुई अन्जान स्कूले केटाहरुलाई तपाई भनेको सम्झना आइरहन्छ । हामीलाई त्यो इज्जतको आशा थिएन । उनको व्यवहारबाट हामी नतमस्तक् भएका थियौ । नारायण गोपालका लागि शब्दहरुले कति मह्त्व राख्थे भन्ने कुरा उनका गीतहरुबाट पनि थाहा हुन्छ ।
फेरी बोलीतिरै फर्कौं । समाजले सम्मान पुर्वक नबोल्दा एउटा ठुलो समुदाय आहत् भएको सत्य कसैदेखि छुपेको छैन । कतिपयलाइ लाग्ल तिमी भन्दैमा, जातीय कुरा गर्दैमा दुख्नु पर्ने के छ र? दुखाइ भोगेकासंग हुन्छ, पीडा साटेर त हेर्नुस् अनि थाह हुनेछ दुखाइ के हो भनेर ।
प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७५ १७:१२
आश्विन २९, २०७५ दिवाकर बागचन्द
माक्सिम गोर्कीको "आमा" पढ्दा, नेपालमा लोकतन्त्र थिएन । लुकेर पढ्नु पर्थ्यो । म प्रेमको प्रदर्शन गर्ने ब्यक्ति होईन, यो मेरो स्वभाव भित्र पर्दैन । आमा पढेपछि मेरो, यो अनौठो स्वभाव झन दिगो भयो । उदेक लाग्दो कुरा त के भने म आफुले मन पराएकी केटीले पनि मेरो मन पढिदिउन भन्ने चाहन्थें । मेरो “साइलेन्सलाई” सम्झिदिउन भन्ने सोच्थें । तर उनले बुझिनन्, उनका लागि म काले कलौटे, नालायक थिएँ । त्यसपछि मैले प्रेमको खोज त्यागि दिएँ । यो खोजेर पाइने कुरै होईन । मैले त्यो प्रेम पाइन ।
म भारतको सिमा नजिकको शहरमा हुर्केको ठिटो भारतीयसँग रगतको नाता भएको मान्छे, पाकिस्तानीसँग आत्मियताको कल्पना पनि थिएन । अनेकौं मतभेदका बाबजुद भारत मेरो लागि लोकतन्त्रको प्रर्याय हो । गान्धीको हत्या पछि लन्डन टाइम्सको सम्पादकीयमा भनिए झै, “भारतले मात्र गान्धी यानी "बापु" लाई जन्म दिन सक्छ” भन्ने कथन मलाई सही लग्न थालेको छ । भारतको स्वतन्त्रता अदभुत छ । बिभिन्न उतार चढावका बाबजुद त्यहाँको लोकतन्त्रलाई कुनै शक्तिले बिस्थापित गर्न सक्दैन किनकी यसको बिजारोपण गान्धीले गरेका थिए ।
कुरो तेति खेरको हो, जब म अमेरिकामा कुनै एक स्टोरमा काम गर्थें । कमजोर अंग्रेजी, ब्यापारको 'ब' नजानेको यो पत्रकारलाई काम सिकाउन अरु सहकर्मी त्यति उदार देखिएनन् । दुई वर्षअघि एक जना पाकिस्तानी नौ जवान म काम गर्ने स्टोरमा काम गर्न थाले । म उनलाई अवलोकन गरिरहेको थिएँ । नयाँ काम नयाँ ठाउ मैले आफ्ना सुरुवाति दिन स्मरण गरें । ति नौजवान सोहेब ताहिरलाई म सक्दो काम सिकाउन थाले । उनले एक दिन मेरो आँखामा हेरेर भने, "खुदा आपको तरक्की वर्कत दे ।" उनले मलाई अङ्गालो हाले ।
अर्को दिन उनकी आमा उर्दुमा “खाल्दा” बेगम नाजिर ताहिर बिरयानी लिएर आइन् र भनिन बेटा तुम दोनो के लिए लाई हुँ, मिलके खाना । यसरी दिनहुँ सोहेबको लागि मात्र नभएर “खाल्दा” मेरा लागि पनि खाना ल्याउन थालिन् । सोहेबले मेरो बारेमा खाल्दालाई सबै रेपोर्टिङ गर्थे । एक दिन बडो कडाइका साथ “खाल्दाले” मलाई भनिन्, सराब पिना कम कर बर्ना कान के निछे दुङ्गी । उनी पेशाले शिक्षिका थिइन्, मैले धेरै दिन पछि एउटी गुरुमाको अवतार अमेरिकामा पाएँ । उनी मेरी गुरुमा भन्दा आमा "खाल्दा" थिइन् । मेरे तीन बच्चे है, अब चार होगए सम्झा टाइगर उनी भन्ने गर्थिन् ।
उनले थपिन्, संसारमा सबै थोक भ्रम हो । मृगतृष्णा हो । सत्य त केवल प्रेम हो, यही प्रार्थना "इबाद्त" हो । त्यसैले प्रेमलाई समेट्ने कोसिश गर्नु पर्छ । घर, परिवार, समाज देश र प्रकृतिमा पनि प्रेम देख्नु पर्छ । उनले यसो किन भनिन्, मलाई थाहा छैन, अनयासै मैले उनको पाउ छोएँ र ढोगे । खाल्दा आखाभरी आँसु लिएर घरतर्फ लागिन्, म उनलाई आँखाबाट ओझेल नहुन्जेलसम्म हेरिरहें ।
तर, आज खबर पाएँ, मेरी पाकिस्तानी आमाले सधैका लागि आँखा बन्द गरिछन् । हृद्यघातबाट उनको मृत्यु भएछ । खाल्दा तिमी त संसार छाडेर सदैका लागि निदाइछेउ । खाल्दा तिमीले आफ्नी बुहारीलाई खान बनाएर खुवाउने सौभागय पनि दिइनौ । मेरी “खाल्दा” आमाको पार्थिब शरिर पाकिस्तान लागिंदै छ । म केहि बोलिन । मनै मन भने, खाल्दा तिमी मृत्यु पछि पनि एउटा सन्देश लिएर पाकिस्तानी धर्तीमा पुग्दै छेउ, “सत्य त केवल प्रेम हो यही प्रार्थना, इबाद्त हो ।"
प्रकाशित : आश्विन २९, २०७५ १३:१४